Thenga ukuthandwa okwenyani kwi-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Thenga ukuthanda okwenyani kwi-Instagram
Disemba 14, 2018 0 IiCententarios 998
I-Instagram yenye yezona zinto zidumileyo kwaye zilandelwe zinethiwekhi zanamhlanje. Akumangalisi ukuba ibe yenye yezona zinto ziboniswayo zee-brand eziphambili. Wonke umntu ufuna ukubhengeza iimveliso kunye neenkonzo zakhe apha kwaye afikelele kwelona nani liphezulu labasebenzisi. Kodwa ukwenzela loo nto, kuya kufuneka ubenayo inani elikhulu labalandeli Unokuthandwa okuninzi kupapasho. Ukulandela okulandelayo, abaninzi kule nethiwekhi bafuna ukuthenga ukuthandwa ukubonisa ukuba babo abalandeli nxibelelana
Izinto ezithandwayo kupapasho okanye ukwenziwa kwakhona kwevidiyo kwi-Instagram kubonisa ukuba banokwamkelwa okukhulu phakathi kwabalandeli. Oku kubanjwa zii-algorithms ze-Instagram kwaye zibeke umxholo phakathi kwezona zibalulekileyo kwinethiwekhi. Oku kukhuthaza ukwanda kwe- Inani labalandeli kwaye ukupapashwa kunokufikelela kubantu abaninzi ngexesha elincinci.
Iifoto kunye neevidiyo ezikhethwe yi-Instagram ukuba zivele kweyona ndawo iphambili kunye neyona ndawo idumileyo kwinethiwekhi yilezo zibonakalisa inani elikhulu lokuthandwa okwenyani. Kungenxa yokuba ukuthandwa ezininzi kushicilelo kunika ukuthembeka kwiakhawunti ethile. Oku kuqondwa ngabantu njengezimvo zokuzithemba.
Ungayithenga njani ukuthanda okwenyani kwe-Instagram
Kungenxa yesi sizathu le Iimpawu ezininzi okanye iiprofayile zobuqu ziyavuma ukuthenga ukuthandwa kwezithuba zazo kwi-Instagram. Nangona kunjalo, zi-algorithms zenethiwekhi yentlalo ngokwayo enokubona isenzo, ngenxa yoko kungcono ukuthenga ukuthandwa okwenyani kwaye hayi kwii-bots okanye ii-akhawunti ezingezizo.
Ngale ndlela, zininzi iiwebhusayithi kwi-net apho ungathenga khona izinto ezizithandayo kwi-instagram. Ngokufanelekileyo, khetha indawo esinika amava ngokwaneleyo. Ukongeza ekuqinisekiseni umgangatho weeprofayile ukusuka apho ukuthandwa kuya kufikelela khona kupapasho lwethu.
Ukuthenga ukuthandwa okwenyani sidinga ukuba neakhawunti ye-Instagram yoluntu, kuba ayinakuthunyelwa abalandeli okanye uthanda iiprofayili zabucala. Okulandelayo, kuya kufuneka uye kwezinye zezi webhusayithi kwaye ulandele imiyalelo. Kuxhomekeke kwinani lokuthanda ukuthenga, ixabiso liya kuba linye okanye elinye. Ngexesha elincinci iimpapasho zakho ziya kufumana isixa sokuthandwa ozifumeneyo.
Kucacile ukuba uninzi luya kuthatha ukuba ukuthenga into yokwenene akuyonto iluncedo. Nangona kunjalo, phantse zonke iimpawu eziphambili zenza njalo ngeziphumo ezanelisayo. Nangona kunjalo, kuyafuneka ukuqhubeka ukulayisha umxholo womgangatho kwiprofayile yethu, kuba ngaphandle koko ukuthengwa kwezinto ezithandwayo kuya kuba yinto engabalulekanga kangako.
Ngamafutshane, Ukuthenga ukuthandwa okwenyani kwi-Instagram yinto eqhelekileyo kakhulu kunokuba sicinga. Zombini iimpembelelo kunye neebhloko kunye neenkampani zisebenzisa le ndlela ukuzama ukufumana ukubonakala okukhulu nokukhulisa ezazo Inani labalandeli. Utyalomali oluncinci sinokuqala ukubona iziphumo ngexesha elifutshane kakhulu.
Isicwangciso, ke, esikhawulezayo, esinoqoqosho, silula kwaye siyasebenza sokonyusa ubume beakhawunti yethu kwinethiwekhi yoluntu. Nangona sinako Thenga abalandeli kwi-Instagram Ukuba injongo yethu kukufezekisa ngokukhawuleza okukhulu.
Ubafumana njani abalandeli abakhawulezayo kwiinethiwekhi zethu zentlalo
Thenga ukuthanda okuzenzekelayo kwi-Instagram